Mas’uuliyiinta Deyniile iyo Hodan oo daahfuray Barnaamij wacyigelin ah “Video+Sawirro” – Radio Muqdisho
Mas’uuliyiinta Deyniile iyo Hodan oo daahfuray Barnaamij wacyigelin ah “Video+Sawirro”
Mas’uuliyiin ka tirsan degmooyinka Deyniile, Hodan iyo Kaxda ayaa maanta daahfuray mashruuc wacyigelin ah oo laga hirgelinayo xerooyin Barakac oo ku yaala degmooyinkaasi.
Mashruucan wacgelinta ah oo loo sameynayo barakacayaasha ku nool degmooyinka Hodan, Dayniile iyo Kaxda ayaa ujeedadiisu tahay sidii barakacayaasha loo siin lahaa wacgelin la xiriirta sidii looga hortagi lahaa gudniinta Fircooniga ah, kufsiga iyo tacadiyada ka dhanka ah haweenka, caruurta iyo dadka taagta daran.
Sidoo kale mashruucan waxaa qeyb ka ah wacyigelin ku saabsan sidii ay wadashaqeyn toos ah u yeelan lahaayeen mas’uuliyiinta degmooyinkaasi iyo dadka barakacayaasha ah si looga hortago tacadiyada loo geysto barakacayaasha.
Gudoomiye ku xigeenka degmada Deyniile ee dhinaca arrimaha bulshada Maxamed C/qaadir Cali oo mashruucan daahfuray ayaa sheegay in barnaamijkan uu ahmiyad gaar ah u leeyahay dadka barakacayaasha ah.
Abuukar Salaad oo ah gudoomiye ku xigeenka degmada Hodan ayaa isaguna dhinaciisa tilmaamo ka bixiyay faa’iidada mashruucan uu u leeyahay bulshada barakacayaasha ah, wuxuuna hoosta ka xariiqay in arrintani ay tahay mid looga hortagayo tacidayada loo geysto barakacayaasha, wuxuuna rajo weyn ka muujiyay in qorshahan uu guuleeysandoono..
Maamulyayaasha xerooyinka laga hirgeliyay mashruucan wacyigelinta ah ayaa si isku mid ah u soo dhaweeyay daahfurka mashruucan, iyagoo xusay in ay qaateen tababar ku saabsan wacyigenkta barakacayaasha, waxeyna u mahadceliyeen mas’uuliyiinta degmooyinkaasi.
Mashruucan oo tijaabo ah- Isla xisaabtanka Deegaannada/xeryahaaan rasmigaaheyn – waxa uu ka shaqeeya horumarinta islaxisaabtanka iyo hufnaanta maamulayaasha deegaannada/xeryaha barakacayaasha ee aan rasmiga aheyn ee magaalada Muqdisho, iyada oo ujeedadu tahay wanaajinta xaaladaha nololeediyo dhowridda dadkabarakacayaasha ah.
Mashruucu waxa uu la falgalaa maamulayaasha xeryaha dadka barakaca ah, kuwaasoo dalka Soomaaliya gudihiisa caanku ah magaca “Horjoogayaal”. Haddaba si loo aqoonsado adeegyada ay bixiyaan, waxaa la isla afgartay kaddib wadaxaajood lala yeeshay in magaca horjooge uu leeyahay micnayaal aan fiicneyn, halka dhammaan howlgalladoodu aysan wadaaheyn kuwohalis ah. Sidoo kale, mashruucu waxa uu ugu yeeraa isagaoo tixraacaya shaqadooda maamulanimo, magaca Maamulayaasha Deegannada/Xeryahaaan Rasmiga aheyn.
Tijaabadan ayaa laga hirgeliyey 10 ka mid ah deegaamada DadkaBarakacayaasha ah iyadooujeedaduna ay tahay in ‘wax loogabartoficilahaan’ iyadoo la isticmaalayo habcilmibaaris-ficilah, taasoo wargelindoonta wadahadalka iyo taageerada ku saabsan arrinta barakacayaasha iyo maamulayaasha deegaannada/xeryaha aan rasmiga aheyn.
Hirgelinta mashruucan ayaa iskaashi dhow la galayeeshay maamullada degmooyinka Gobolka Benaadir (Degmooyin kii laga hirgeliyay mashruuca ) iyadoo laga rajeynayay in labada dhinac – Maamullada Degmooyinka iyo Maamulayaasha Xeryaha Barakaca – ay yeelan doonaan aragti mideysanoo ay kaga wadashaqeynkaraan hagaajinta xaaladaha dadka barakacayaasha ah islamarkaana ay ku hagaajinayaan xiriirka iyo iskaashiga ka dhexeeya iyaga lafahaantooda.
Isku soo wadaduub, iyadaoo la tixgalinayo baahida ay muujiyeen barakacayaasha iyo maamulayaasha xeryahabarakaca, habkani waxa uu diiradda saarayaa:
Kobcinta islaxisaabtanka ka dhexeeya dadka barakacayaasha ah iyo maamulayaasha xeryaha/deegaannada aan rasimiga aheyn, si kor loogu qaado dhowridda xuquuqda, bixinta adeegyada iyo maareeynta deegaannada barakacayaasha;
Hagaajinta iyo kordhinta xidhiidhka kadhexeeya maamullada xeryaha/deegaannada barakacayaasha iyo maamullada dowladda hoose, gaara haan, guddoomiyayaasha degmooyinka ay ku yaallaan goobaha laga fuliyay wajigatijaabada ahee mashruucan;
Ugu dambayntii in Hey’adaha caalamiga ah ee ka shaqeeya arrimaha barakacayaasha laga qeybgaliyo howshasi loo xoojiyo loona korjeegteeyo – iyadoo ay wehliyaan masuuliyiinta maamullada degmooyinka – heerarka isla xisaabtanka ee ka jira deegaannada laga hirgeliyay mashruuca niyadoona la rajaynayo in laga dhaqangeliyo looga na faa’iideysto casharada laga barto habkan goobo kale.
Wajigan tijaabada ah ayaa lagu odorosay sii socoshada dowrka dowladda ay ku leedahay mashruucan ee la xiriira dhiirigelinta u hogaansanaan tamabaadii’da caalamiga ee hagtala macaamilka dadka ku barakaca dalka gudihiisa.
Madaxweynaha dalka oo goor dhaw gaaray Jowhar